LongHorn FX Review Eprel 2021 Gụchaa Ihe Omume Anyị zuru ezu - Mụta 2 ahia
Longhorn FX Review: formgwọ Platform, readgbasa, Akụ Ahịa, na Iwu 2021
Ọ bụla Forex ọorụ maara na iji zụọ ahịa ego online, ị chọrọ a trading n'elu ikpo okwu na-eme ya na. Ebumnuche, ụlọ ọrụ a kwesịrị ịnwe nhọrọ dịgasị iche iche nke akụ na enye, nnukwu ọrụ ndị ahịa, yana ụgwọ dị ala.
Longhorn FX bụ usoro ịzụ ahịa azụmaahịa nke na-arụkwa ọrụ na CFDs. Na mkpokọta, na ore ahia nwere nnukwu ego nke tradable ego na ngwa na-enye. Naanị ụfọdụ akụ dị ebe a bụ FX abụọ, ngwaahịa CFDs, cryptocurrencies, ọla, na indices.
Ada ada? Anyị ga-eme ka ị gabiga ihe niile ịmara banyere usoro azụmaahịa a n'ịntanetị, site na ihe ụlọ ọrụ ahụ bụ na ihe ị nwere ike ịzụ ahịa, na ntinye na ụgwọ ị nwere ike ịtụ anya.
Gịnị bụ LonghornFX?
Dika anyi meturu aka, Longhorn FX bu onye mbu na onye na-ere ahia CFD nke nyere ndi ahia ahia plethora nke ego. Can nwere ike ịzụ ahịa ihe niile site na ego ego na mkpụrụ ego crypto na ngwaahịa na indices - enwere ike ịnweta ha niile site na CFD. Na nkenke, nke a pụtara na ị nwere ike ire ere ma zụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ihe ntinye ego a na saịtị a bu ezigbo ihe omimi 1: 500 ma igha ahia na MT4 di egwu. Nke a nwere ọtụtụ ngwa ahia na eserese iji mee ihe. Nwere ike iji igwe ọrụ akpaghị aka iji zụọ ahịa na nnọchite gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
N'ihe gbasara ụgwọ, a na-ahazi ụgwọ ọrụ na ikpo okwu a na $ 6 maka ọnụego ọ bụla ị na-azụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, na LonghornFX ihe ọ bụla ị tinyere ga-agbanwe n'ime Bitcoin na akaụntụ ahịa gị. A na-akpọkwa ndị ahịa ego ka Bitcoin kwụọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ.
Kedu ihe m nwere ike ahia na LonghornFX?
LonghornFX nwere ihe karịrị 150 tradable ngwá na-enye. N'elu nke ahụ, enwere ihe dịka 60 FX abụọ dị na ikpo okwu a, 35 ụzọ abụọ cryptocurrency, ebuka 64, na ngwaahịa 11 na indices. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmegharị pọtụfoliyo ụzọ mbu ya na ihe niile site na otu onye na-ere ahịa.
Na saịtị ị ga-ahụ ezigbo nhọrọ nke ụzọ abụọ Forex. Nke a bụ naanị ụfọdụ ihe ị ga-atụ anya ya:
Ndị isi gụnyere ihe dị ka EUR / USD, AUD / USD, GBP / USD, USD / CAD, GBP / JPY, NZD / USD na USD / CHF.
Pzọ abụọ dị ka EUR / AUD, AUD / JPY, CAD / JPY, AUD / NZD, EUR / GBP, na GBP / CHF
Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ego na-abata dị ka peso Mexico, Turkish Lira, na South African Rand ịkpọ aha ole na ole.
Anyị ekwuola banyere Forex, yabụ ugbu a, anyị ga-agafe ihe ọzọ ị nwere ike ịzụ na LonghornFX
Ọ bụrụ n’ị chọghị ịzụ ahịa azụmaahịa, echegbula onwe gị, ebe ọ bụ na enwere akụ nke akụnụba n’elu ikpo okwu a.
Commodities na-enye mkpuchi ọla dị ka ọlaedo, ọlaọcha na platinum. Enwekwara mmanụ, gas, na ume. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere nhọrọ.
Y’oburu n’inwe mmasi n’onodu ogugu na onodu di obere, enwere ihe dika akwukwo iri na abuo n’elu ikpo okwu a. Arefọdụ bụ ndị a maara nke ọma dịka FTSE 100, NASDAQ 100, na Dow Jones 30.
Indices ndị ọzọ na LonghornFX gụnyere; Hong Kong 50, Nikkei 225 (ndeksi maka Tokyo Stock Exchange), ESP35 (Madrid Stock Exchange), AUS200, na ndị ọzọ
Nweta ihe karịrị 60 ngwaahịa CFD dịka American International Group, Alibaba Group Holding Ltd, Volkswagen AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Procter & Gamble Co, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'ihi eziokwu ndị a bụ ngwaahịa CFDs, ị nwere ike ree ma zụta ọnọdụ na ụlọ ọrụ dịka Coca-Cola, Amazon, American Express, Google Inc, Facebook wdg Na mgbakwunye na nke a.
E nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40 ụzọ abụọ cryptocurrency na LonghornFX, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale na ịkọ ọdịnihu nke mkpụrụ ego crypto ị gaghị adị mkpụmkpụ nhọrọ n'elu ikpo okwu a.
Di na nwunye Fiat-to-crypto gunyere BTC / USD, BCH / USD, NEO / USD, DASH / USD, ETP / USD na OMG / USD
Mgbe ahụ enwere ọtụtụ ụzọ abụọ crypto-cross dị ka BCH / BTC, NEO / BTC, XRP / BIT, ZEC / BTC, QTUM / BIT, SAN / BIT, LTC / BTC, ETP / BIT, XMR / BTC, na ndị ọzọ
LonghornFX togwọ Extụ Anya
LonghornFX na-ekwe nkwa mgbasa dị warara yana ọrụ dị ala. Thegwọ ego ahụ dị mfe nghọta na nghọta maka ndị ahịa. N'okpuru ebe anyị abanyela na ntakịrị nkọwa gbasara ụgwọ ị ga-atụ anya na ikpo okwu a.
Usoro ọrụ na LonghornFX dabara adaba na ngalaba a. Maka 'otutu' ahia, enwere ego $ 6. Ma ị na-ere obere obere ma ọ bụ buru ibu ụgwọ ahụ bụ otu.
Nke a pụtara na oge ọ bụla ị zụrụ ma ọ bụ ree ọ ga-akwụ $ 6 kwa nza na mbido mgbe ị banyere n'ọkwa gị, yana $ 6 kwa nza ọzọ na njedebe mgbe ị kpebiri imechi ọnọdụ gị. Nke a bụ asọmpi ma ị lelee ụgwọ azụmaahịa nke ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ndị ọzọ
Mgbasa ahụ dabere na ngwa ọrụ ị lekwasịrị anya n'ịzụ ahịa. Dịka anyị kwuru, LonghornFX na-enye mgbasa dị oke warara na ọtụtụ akụ.
Ka anyị banye n’ime ala na-agbasa na-enye site na nke a ore.
N'ihe banyere ego, NZD / USD nwere ike iji mgbasa nke 0.7 pips gbanye. Mgbe ahụ ị nwere USD / JPY na EUR / USD na asọmpi asọmpi siri ike nke pipụ 0.8.
Na njedebe nke ọzọ, enwere ụzọ fiat-to-crypto dị ka BTC / USD nwere mgbasa nke 20.1 pips, DASH / USD 0.34000 pips, BCH / USD 0.71000 pips, na ETH / USD na 0.83000 pips.
N'ihe banyere ngwa ahia n'elu ikpo okwu a - mgbasa a na-asọ mpi. Iji nye gị ihe atụ nke ihe ị ga-atụ anya: XAU / USD (gold) nwere mgbasa nke naanị 2.4 pips, na XAG / USD (ọla ọcha) dị na 2.6 pips. I nwekwara ike ahia XPT / USD (platinum) na 20.1 pips.
US na UK CFDs abụọ bịara na mgbasa nke 0.8 pips - nke a bụ ezigbo uru gbasaa.
Dịka anyị kwurula, onye na-agba ahia a dabara adaba na MT4 (MetaTrader4). MT4 bụ ngwá ọrụ bara ezigbo uru na ụlọ ahịa onye ọ bụla. Uzo a nke ato na-enye ndi ahia ahia otutu ngwa oru nyocha, onu ahia na otutu ihe bara uru.
Iji nye gị ihe atụ nke ngwa ọrụ enyemaka ị ga - ahụ na MT4, lee anya na ndepụta anyị jikọtara:
Ngwá ọrụ MT4 dị ka Calculator Nhazi ọnọdụ, Channel SHI bụ eziokwu, Tracker i-Profit, Chart Undock, Ngosipụta Iwu, Autofibo, NewsCal, ụkpụrụ SL & TP, Mpaghara nkwụsị, Nchịkọta Xandra, na ọtụtụ ndị ọzọ
Ndị na-egosi dịka Index Flow Money, Index Facilitation Market, Trendline, Accelerator Oscillator, Envelopes, Fibonacci, Stochastic, ZigZag, On Balance Volume Indicator (OBV), The Money Flow Index (MFI), RSI - enwere n'ezie ebe a na-enye onyinye.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ngosipụta nke ọnọdụ mgbe ahụ ihe ngosi dịka Mgbanwe Mgbanwe Ọkpụkpụ Na-agagharị (MACD), Ichimoku, Ngosipụta Nke Na-agagharị (EMA), na Bollinger Bands dị
Atụmatụ dị ka inwe ike ịzụ ahịa karịa otu akaụntụ, obodo MQL4,
N'elu atụmatụ ndị a edepụtara n'elu, MT4 na - enyere gị aka iji akpaghị aka Forex robot (ma a na-akpọ ya a Forex EA) iji zụọ ahịa maka gị - nke pụtara na ị nwere ike ịzụta ma ree ebe ị na-azụ ahịa kpamkpam.
Enwere uzo di iche iche nke ahia di iche iche ka ịhọrọ site na ya, yabụ i ghaghi inwe nsogbu ichota nke ga adabara uzo ahia gi.
Enwekwara Onye ahia weebụ, ngwa (iOS ma ọ bụ gam akporo) ma ọ bụ desktọọpụ - ha niile na-enyere gị aka ịnweta akaụntụ LonghornFX gị iji zụta, ree ma debe ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụrụhaala na ị nwere njikọ ịntanetị.
Na mgbakwunye na ndakọrịta nke onye na-ere ahịa na MT4, LonghornFX na-enyekwa gị ohere ịzụ ahịa site na STP (Nhazi Nhazi). Nke a pụtara na ị nwere ike irite uru site na ụfọdụ ndị na-eweta nnukwu ego na oghere ahịa.
N'ihe banyere itinye ego na akaụntụ LonghornFX gị, enwere nhọrọ abụọ dị iche iche ị ga - ahọrọ. You nwere ike iji ego kredit ma ọ bụ debit tinye ego na akaụntụ gị ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
Dịka anyị gosipụtara na mbụ, mgbe ị tinyere ego na akaụntụ gị - Instacoins (onye na-eweta ịkwụ ụgwọ nke ndị ọzọ) na-akwado ya ma gbanwee ya na Bitcoin, yabụ ị na-azụta Bitcoin site na kaadị akwụmụgwọ gị / debit.
I nwekwara ike tinye na akaụntụ gị site na ịzụta ụfọdụ Bitcoin site na onye ọzọ na-ere ahịa na ịdebe mkpụrụ ego ndị ahụ n'ime obere akpa akaụntụ LonghornFX gị.
N'ezie, ọ bụrụ na inwee ụfọdụ Bitcoin ị nwere ike ịga n'ihu ma kwụọ ụgwọ akaụntụ gị ozugbo, na-ewepụ mkpa ọ bụla maka ndị na-akwụ ụgwọ mpụga.
N'okwu a, ịkwesịrị
Họrọ 'nkwụnye ego'
Mee otu adreesị obere akpa Bitcoin na ihuenyo - n'ihi na a ga-eziga ego gị na adreesị ahụ.
Ikwesiri igha na obere akpa Bitcoin gi
Tapawa na obere akpa Bitcoin ị depụtaghachiri na mbụ
Tinye uru Bitcoin ịchọrọ iziga na akaụntụ LonghornFX gị
Ugbu a ejiri Bitcoin tinye ego na akaụntụ gị.
Ọ bụrụ n ’iji nkwụnye ego ma ọ bụ kaadị kredit na - etinye ego - LonghornFX nwere nkwụnye ego pere mpe nke $ 50. Y’oburu n’itinye ego n’ego gi na Bitcoin na mbu, ikwesiri itinye $ 10 opekata mpe. N'ọnọdụ abụọ, ị nwere ike ịzụ ahịa na obere ọkwa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị nwere obi iru ala.
N'elu ikpo okwu a, LonghornFX na-ekwu na ọ na-edozi arịrịọ ịhapụ n'otu ụbọchị, n'ọtụtụ oge. Platformsfọdụ nyiwe nke onye na-ere ahịa anyị na-ahụ ga-achọ ụbọchị ma ọ bụ abụọ iji gafee usoro mwepu, yabụ nke a dị mma.
Ego ole na ole ị nwere ike ịrịọ bụ $ 10, ozugbo Longhorn FX nyere ikike maka arịrịọ gị, ị ga-enweta Bitcoin gị na obere akpa gị.
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị gbasara LonghornFX bụ mmesapụ aka na-enye mmụba nke ikpo okwu.
Ọ bụrụ n ’ibi na Europe ma ọ bụ UK, mgbe ahụ ị ga - amata nke a na - apụtakarị na ị ga - ejichi okpu ESMA, dịka 1:20 na - arụ ọrụ na 1: 2 na cryptocurrencies.
N'ụzọ megidere nke ahụ, mgbe ọ bịara na LonghornFX ha na-emesapụ aka nke ukwuu - na-enye ihe dịka 1: 500. Nke a dabere kpamkpam n'ụdị akụ ị na-azụ ahịa. Anyị achịkọtara ndepụta nke leverage nke ikpo okwu na-enye.
Ọla - 1: 500
Ike -1: 200
Indices - 1: 200
Ahịa - 1:20
Na ihe atụ nke 1: 500 leverage, ka anyị kwuo na ị nwere akaụntụ yana $ 200 na ya. Nke a pụtara na ị nwere ike ịzụ ahịa ruru $ 100,000 n'ụzọ dị irè. Na-eburu n'uche mgbe niile ma jiri nlezianya na-aga n'ihu mgbe ị na-eji ihe leverage - n'ihi na ọ nwere ike ibute isi obodo na-efu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ agaghị anabata gị.
Nkwado ndị ahịa bụ otu n'ime usoro dị mkpa iji chee echiche mgbe ị na-ahọrọ ezigbo ore ahia. Anyị gbalịrị ma nwalee ya maka onwe anyị, ọ masịrị anyị na ọsọ nke otu onye otu nkwado ndị ahịa dị iji zaa ajụjụ anyị na mkparịta ụka ndụ.
Inwe nhọrọ nkata ndụ bụ mgbe niile bonus, O yikwara ka ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ mgbe ọ bịara n'ịgwa mmadụ a maara ama okwu. N'elu mkparịta ụka na-adị ndụ ngwa ngwa, ndị gị na obere obere ọdịnala nwere ike kụrụ 'arịrịọ arịrịọ' yana otu onye otu ndị ọrụ ahịa ga-akpọghachi gị ozugbo.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ịgwa onye ọ bụla okwu na ajụjụ gị abụghị ọsịsọ, ịnwere ike zigara ha email na-akọwapụta ihe ị chọrọ enyemaka na ya - ndị otu a ga-agaghachikwute gị.
Na LonghornFX ị nwere ike ịmepụta akaụntụ ngosi site na MT4 ma ọ bụ Web Trader. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-eji MT4.
Maka ndị ahịa na-enwebeghị MT4, ha chọrọ ibudata ngwanrọ ma wụnye ya - ọ dị mfe. Naanị họrọ folda maka faịlụ ebudatara ịbanye, ma pịa 'mepụta ụzọ mkpirisi desktọọpụ' ka ị mara ebe ị ga-ahụ ya.
Anya isi na ị ebudatara faịlụ ahụ, ị ​​nwere ike ịtọ akaụntụ ngosi gị site na ịgbaso usoro ndị a:
Ihe mbụ na mbụ, pịa 'faịlụ'
Ọzọ, ị kwesịrị 'imeghe akaụntụ'
Aha zuru ezu, adreesị, akara ekwentị, ụdị akaụntụ - nke ọzọ 'sochiri'
Ugbu a, n'ihe banyere nhọrọ nkesa, ịkwesịrị ịhọrọ 'LonghornFX-Demo' - nke sochiri 'na-esote'
Ọzọ, ịkwesịrị ịhọrọ 'akaụntụ ngosi ọhụụ' - pịa 'ọzọ'
Dejupụta nkọwa ndị dị mkpa
Pịa 'Emecha' na ị ga-abanye n'ime akaụntụ ngosi ngosi ọhụrụ gị na akpaghị aka.
Ugbu a ị nwere ike ịmalite na akaụntụ ngosi gị n'efu. Enwere ike iji akaụntụ ngosi ahụ mee ihe oge niile na ogologo oge ịchọrọ. Nwere ike igosi ahia na BIT, GBP, EUR ma ọ bụ USD na ego ọ bụla nke ịkwa emo ịchọrọ.
Demo bara ezigbo uru nye ndị ahịa nwere ahụmahụ na ndị ahịa ọhụụ ọhụụ. Ọbụghị naanị na ịnwere ike inweta ezigbo ọnọdụ ahịa na-ejighị penny - mana ịnwere ike ịnwale aka gị na atụmatụ ọhụụ na itinye aka na nka gị. Anyị na-eche na a brokerage na a free ngosi akaụntụ nwere ike ịbụ naanị ihe bara uru, dị ka ọ bụghị niile nyiwe na-enye ngwá ọrụ a na ndị ahịa.
Enwere ọtụtụ mba ndị na-akwado usoro a, mana ọ bụrụ na ibi na nke ọ bụla n'ime ebe ndị a na-esonyeghị, anyị echekwala gị ụfọdụ ọrụ ụkwụ wee depụta mba ndị LonghornFX anaghị anabata:
Alakụba Alakụba nke Iran
Etu esi abanye na LonghornFX
Ugbu a, anyị agabigala usoro kachasị mkpa nke LonghornFX, ị nwere ike ịnụ ọkụ n'obi ibili ma na-agba ọsọ.
Ọ dị mfe ma kwesiri iwe ihe na-erughị nkeji iri site na mbido ruo n'isi.
Gaa na weebụsaịtị LonghornFX wee pịa 'debanye aha'. To ga-abanye aha mbụ na aha ikpeazụ gị, adreesị ozi-e, na okwuntughe pụrụ iche - nke ga-abụ opekata mpe mkpụrụ edemede asatọ.
Ikpo okwu a na - enyere gi aka idebanye na Google ma obu Facebook - nke ufodu mmadu choro karie.
Nzọụkwụ 2: Nye Akaụntụ Gị
Ọzọ, ịkwesịrị itinye ego na akaụntụ gị ka ị wee nwee ike ịmalite ịzụ ahịa n'ahịa ị họọrọ.
Dị ka anyị kwuru, enwere nkwụnye ego kacha nta nke $ 50 ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ na debit ma ọ bụ kaadị kredit, yana naanị $ 10 ma ọ bụrụ na ị jiri akaụntụ Bitcoin tinye ego na akaụntụ gị.
Ugbu a ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa site na Longhorn. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịmalite site na iji akaụntụ ngosi ahụ anyị kwuru na mbụ.
Dịka anyị metụrụ aka, ma ị nwere ahụmịhe ma ọ bụ na ị nwebeghị, iji ngosi bụ ụzọ dị egwu nke ịnwale ikpo okwu. Ghara ikwu inwe ike nwalee dị iche iche trading azum na-ejighị ego ị tara ahụhụ kpata. Enwere ike iji akaụntụ akaụntụ LonghornFX site na MT4 na Windows, Web Trader, na MT4 maka iOS ma ọ bụ gam akporo.
Anyị na-eche na niile na ihe niile, nke a trading n'elu ikpo okwu nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọbụghị naanị na ịnwere ike ịnweta mgbasa ozi siri ike, ọtụtụ akụ na ahịa, mana ụgwọ na-asọ mpi na $ 6 maka 'ọtụtụ'.
Eziokwu ahụ bụ na LonghornFX na-arụ ọrụ na ikpo okwu MT4 bụ nnukwu uru dị ka enwere akụrụngwa nyocha nke teknụzụ, akụkọ gbasara ego, eserese ọnụahịa yana atụmatụ iji were.
Ihe ndị a niile dị mkpa iji bụrụ onye ahịa na - aga nke ọma - nke ahụ bụ eziokwu belụsọ ma ị kpebie ịzụ ahịa na Longhorn FX site na robot akpaghị aka. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-anọdụ ala wee hapụ ya ka ọ zụrụ gị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ikpo okwu a anaghị ejide ikike na ya anaghị achịkwa ya. Uru nke a bụ, n'ezie, ịnwere ike ịnweta oke ikike itinye ego nke 1: 500. N'ihi ụkpụrụ ESMA, a naghị ekwe ka ndị na-ere ahịa ikikere ịnye ndị ahịa ahịa ihe a.
Kedu ihe nkwụnye ego kacha nta na LonghornFX?
Nkwụnye ego kacha nta iji bido ịzụ ahịa bụ $ 10 ma ọ bụrụ na ị jiri Bitcoin tinye akaụntụ gị, yana $ 50 ma ọ bụrụ na iji ego gị ma ọ bụ kaadị debit akaụntụ gị.
Enwere m ike ịmepee ihe karịrị otu akaụntụ azụmaahịa na LonghornFX?
Eeh. A na-ahapụ gị ka ị mepee ọtụtụ akaụntụ azụmaahịa ịchọrọ, nke ọ bụla nwere ego ego Bitcoin.
LonghornFX ọ na-enye akaụntụ ngosi?
Eeh. N'ezie, ndị ahịa nwere ike mepee ma jiri ọtụtụ akaụntụ ngosi ka ha chọrọ, yana ego ngosi dị ka ịchọrọ.
Ekwesịrị m iziga otu nnabata foto m na LonghornFX?
Mba, ihe niile ịchọrọ bụ aha gị, adreesị ozi-e, paswọọdụ pụrụ iche (mkpụrụ edemede 8) na ụzọ nkwụnye ego na akaụntụ gị.
Enwere m ike ịnweta uru site na ahia cryptocurrencies?
Eeh. Ma dị ka ụdị azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ itinye ego ọ bụla, ọ nweghị nkwa ọ bụla nke ihe ịga nke ọma. Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ iji ngwaọrụ niile dịịrị gị - nyiwe dịka MetaTrader4 dị oke mma, yana ịme usoro maka akaụntụ ngosi LonghornFX na-akparaghị ókè.